किन आजभोली छोरीभन्दा छोरा बढी जन्मिरहेका छन् ? वास्तबिकता यस्ताे रहेछ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more किन आजभोली छोरीभन्दा छोरा बढी जन्मिरहेका छन् ? वास्तबिकता यस्ताे रहेछ
किन आजभोली छोरीभन्दा छोरा बढी जन्मिरहेका छन् ? वास्तबिकता यस्ताे रहेछ
जेठ ५ गते, २०७६ - १२:१७
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष इंग्ल्यान्ड र वेल्समा छोरीभन्दा छोरा बढी जन्मिरहेका छन् । किन त ?सन् १८३८ मा रेकर्ड राख्न थालिएदेखि प्रत्येक वर्ष च्याँ गर्ने शिशुमा छोराकै संख्या बढी छ ।
वास्तवमा प्रत्येक १०० छोरीमा १०५ छोराको जन्म अनुपातलाई सामान्यतया प्राकृतिक मानिन्छ । यो अनुपात चीन र भारत जस्ता देशमा बढी छ किनकि छोरालाई त्यहाँ बढी प्राथमिकता दिइन्छ ।
यो सिद्धान्त अनुसार, त्यसैले जीवनको शुरूआतमा महिलाभन्दा पुरुषको संख्या बढी हुनु भनेको वयस्क अवस्थामा पुरुष र महिलाको संख्या बराबर हुनु हो । वास्तवमा बेलायतमा वयस्क महिला वयस्क पुरुषभन्दा बढी नै रहेको र धेर बाँच्ने गरेको राष्ट्यि तथ्यांक कार्यालयको आँकडाले देखाउँछ ।
वैज्ञानिकहरूले ठ्याक्कै के हुन्छ र यसका कारण के हुन् भनी खुट्याउन गाह्रो हुने बताएका छन् । हामीलाई के चाहिँ थाहा छ भने पुरुष भ्रूणहरू बढी विकसित हुन्छन् र बढी पुरुष शिशु जन्मिन्छन् । एजेन्सी
जेठ ५ गते, २०७६ - १२:१७ मा प्रकाशित